Etu esi tụọ ma melite atụmatụ azụmaahịa Twitter | Martech Zone
Enweghị ozi dị ukwuu na Twitter n'ihu ma enwebeghị m ịnụ na Jack na m Mepee Akwụkwọ na Twitter. Nke ahụ kwuru, m ka na-eji Twitter kwa ụbọchị, na-ahụ uru n'etiti mkpọtụ na-adịghị mma, ma na-achọ ka ọ gaa nke ọma. You nwere ike iji Twitter iji nyere aka kwalite njirimara gị, akara ụlọ ọrụ, ngwaahịa, ma ọ bụ ọrụ gị? N'ezie!
Pasent 43 nke ndị ọrụ achọpụtawo azụmaahịa ọhụrụ pere mpe ma ọ bụ ọkara na Twitter, na ndị ahụ, ọkara soro ma zụọ ahịa n'ụlọ ahịa ma ọ bụ weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ ahụ. Ọzọkwa, ndị na-eso ụzọ gị nwere ike ịbụ ike dị ike maka akara gị: mmadụ atọ n'ime mmadụ ise na-azụ ahịa zụtara dabere na ihe ha hụrụ na nri ha, na XNUMX% na-ezube ịzụrụ ọtụtụ ụlọ ọrụ ha na-eso. SurePayroll
SurePayroll mepụtara ihe omuma a - Ndụmọdụ nchịkọta Twitter dị mfe iji meziwanye njikọ aka gị ozugbo - transsụgharị Twitter ahịa na mmesho Atụmatụ na nke a zuru ezu infographic:
Nzipụta - na agbanyeghị ọdịnaya, naanị ịnwe ụlọ ọrụ akara ụlọ ọrụ na-eme ka echiche nke akara mara ndị ahịa.
Kpọọ ka ị rụọ ọrụ - ndị na - azụ ahịa nwere ike ime ihe na ozi na Twitter karịa site na saịtị, mmekọrịta mmekọrịta, email, ma ọ bụ ozi ziri ezi.
zuo - mmadụ atọ n’ime mmadụ ise na-eso ụzọ zụrụ ahịa si obere azụmaahịa na-ajụ ọkara dabere na ihe ha hụrụ na Twitter.
Mgbochi - ntinye aka, mmụba ndị na-eso ụzọ, na ịpị aka bụ usoro kachasị mkpa dị ka Twitter.
Ihe omuma ihe a na-achota otutu ihe iji kọwaa otutu akuko na dashboards di na nyocha nke Twitter, tinyere oru Tweet na ihe ndi na-ege nti.
Gaa Leta Twitter gị
Etu esi abawanye njikọ na Twitter
Tweet na ezigbo oge iji ngwaọrụ dị ka Soro, echekwa, ma ọ bụHootsuite data na ntinye aka nke onwe.
Tweet na nri ọdịnaya iji foto, vidiyo, nkwuputa, onu ogugu na hashtags iji bulie oke.
Tweet na ụzọ ziri ezi site na ikenye otutu oge kwa ubochi, ikwughari tweets, iji nkata Twitter, ihe ndi mmadu na-eme na ntaneti, na ikele ndi nile na eketa ọdịnaya.
Ule nwere okwu dị iche iche, usoro, na ịme ntuli aka.
Iji ngwaọrụ dị ka Followerwonk na Buzzsumo ịchọta na ịgbaso mmetụta.
Tags: bufeerappbuzzsumo-esochukwuhootsuitendụ tweet omumendụ tweetsTwitterakparịta ụka twitterọdịnaya twitternjikọ aka twitterFoto twitterAhịa Twittermmesho twittertwitter metricsnkekọrịta twitteroge twittervidiyo twittermgbe tweet
Mee 19, 2008 na 6: 49 PM
Daalụ maka ịkekọrịta vidiyo a Doug, ọ dugara m ịdebanye maka Twitter taa… mgbe ịga na saịtị ahụ ihe dị ka ugboro 30 n'afọ gara aga. Enweghị m ndị ahịa na-eji Twitter eme ihe ọ bụla, mana echere m na m nwere ike ịkụnye ụzọ maka ha. Eleghi anya, m ga-abịakwute usoro iji ya iji zụọ ahịa weebụ.
Enwere ndị ahịa nke Patronpath na-eji Twitter? Ma ọ bụ nyocha ya?
Mee 23, 2008 na 3: 38 PM
O juru m anya etu Twitter siri wepu. Na mbu echere m na obu ihe nzuzu, mana amalitere m ihu na o bara uru. Maka onye nwe blọgụ ọ bụ nnukwu ụzọ iji jikọta obodo ndị na - agụ ya, ma nwee olile anya na ha ga - alaghachi karịa maka more
Ọkt 17, 2008 na 11:38 PM
M na-eji Twitterfeed kwa… ọzọ na-enye aka bụ Tweet Mgbe e mesịrị (www.tweetlater.com). Na mgbakwunye na ịnweta ozi blọọgụ ndị ahụ na twitter na TwitterFeed, ị nwekwara ike izipu ozi nnabata onwe, ozi ziri ezi, yana ọbụlagodi tweets kwụ n'ahịrị iji wepụta na ụbọchị ndị ọzọ site na iji tweet emechaa. Ọ bụ nnukwu ngwaọrụ maka ebumnuche azụmaahịa ma ọ bụrụ na itu njikọ gị na ozi nnabata onwe.
M nwere a free akụkọ na ụfọdụ soro videos niile na Twitter ahịa & na-okporo ụzọ si twitter na i nwere ike ịhụ na-ezi egwuregwu na-agụ akwụkwọ gị. Mee ka m mara ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ikwu banyere twitter ụfọdụ ọzọ, oge ọ bụla, yana ọ dị gị mma.
M mfe inweta a hold